Daawo: Khadiija Diiriye oo farsamo yaab leh kursiga loogu xiray iyo Baarliin Biin oo war soo saartay | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Daawo: Khadiija Diiriye oo farsamo yaab leh kursiga loogu xiray iyo Baarliin...
Daawo: Khadiija Diiriye oo farsamo yaab leh kursiga loogu xiray iyo Baarliin Biin oo war soo saartay
Jowhar (Dalkaan.com) – Baarliin Biin oo dooneysay in wasiir Khadiija Maxamed Daariye ay kula tartanto kursiga golaha shacabka ay ku leedahay beesha Yaxar ee Hop097, ayaa caawa shaacisay in tartanka laga reebay oo Khadiija Diiriye kursigaas loo xiray.
Baarliin oo caawa warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee HirShabeelle ay toos uga reebeen tartanka, kadib markii ay hor dhigeen dhowr jid-gooyo.
Caqabada ugu weyn oo ay sheegtay in guddigaas ay hor dhigeen waxay tahay in lagu xujeeyey inay keensato ID-kaar cadeynaya inay tahay beesha ay kursigeeda u tartameyso ee Yaxar.
Waxay sheegtay in markii la weydiiyey ID-kaarka ay guddiga hor geysay odayaashii dhaqanka beesheeda, halka Khadiija Diiriye ay la timid odayaal kale oo isla beesha ah, halkaasna lagu cadeeyey in Baariin ay u dhalatay beesha Yaxar.
Odayaasha ka socday garabka Khadiijo iyo kuwa ka socday garabkeeda, Baarliin waxay sheegtay inay ku jireen labo oday oo wada dhalatay, taas oo guddiga u cadeysay in beesha ay u dhalatay.
Hase yeeshee waxay sheegtay in ugu dambeyntii guddoonka guddiga doorashada HirShabeelle ay si cad ugu sheegeen in doorashada aysan ka qeyb geli doonin oo aysan u diiwaan geli doonin inay u tartanto kursiga beesheeda.
Xaqdarada ay sheegtay in doorashada kursigaas ay ka jirto waxay tusaale ugu soo qaadatay, xubin ka mid ah guddiga soo xulaya ergada oo aan beesha kursiga leh ee Yaxar aan u dhalan, halka iyadoo beesha u dhalatay shaki la geliyey.
Khadiijo Diiriye ayaa hadda ka hor fagaare ka sheegtay in Baarliin Biin aysan u dhalan beesha Yaxar, isla markaana aysan kula tartami doonin kursiga beesheeda, taas oo sida muuqata ay hadda ka dhabeysay Khadiijo.
Sidoo kale Baarliin waxay sheegtay in Madaxweyne Cali Guudlaawe ay kol hore u tagtay, isla markaana uu ka balan qaaday in tartan furan loo geli doono kursigaas oo ayada iyo Khadiijo uusan u kala xagli doonin.
Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya waxay kursigaas ku soo fadhisay tan iyo dowladdii lagu soo dhisay Carta – Jabuuti, 21-sano ka hor.
Khadiijo ayaa maanta Jowhar lagu gudoonsiiyey shahaadada musharaxnimada, Baarliin waxay aheyd halka qof ee beesha u dhalatay oo ku hamisay inay sanadkaan la tartanto Khadiijo Diiriye, balse waxaa loo cadeeyey in tartanka laga reebay.
Maxaa keenay in cododkii Jubaland ee uu ku tashanayay Deni u wareegaan Xasan?
Xog: La-taliyeyaasha Xasan Sheekh oo ka hor-yimid cinwaan khaldan oo shalay ay siisay VILLA SOMALIA
Musharaxiintii Dhinaca Farmaajo aaday oo Dib U soo Laabtay Raali Galina...
”DHALASHADA INGRIISKA DADKA LAGALA NOQONAYO” WAX BADAN,,,,
Arsenal 5-1 Sunderland: Xidiga Nketiah oo dhaliyay Saddexley isagoo Gunners u...
Magacyada siyaasiyiinta caanka ah ee ku fadhiya 13-ka kursi ee doorashadooda...
Koonfur Galbeed oo jawaab ka bixisay go’aankii guddiga FEIT, qaadatay go’aan...
Daacish iyo Suuqa Bakaaraha. Maxaa lagu xaliyay dhibaatadii taagneyd?
Ciidamada Ruushka oo isaga baxay goobo muhiim ah oo ku yaal...
Deg Deg Sheekh Shariif oo Qirtay Inuu Wax Ka Ogaa Eedii...
Guddiga FEIT oo shaaciyey tirada xildhibaanada labada aqal ee shahaadada qaatay